အကြောပြင်ခြင်းက သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ဘယ်လို မြှင့်တင်ပေးသလဲ - Hello Sayarwon
၎င်းပြုပြင်ကုသမှုဟာ ခါးနာကျင်ခြင်း နှင့် အခြားနာကျင်မှုဝေဒနာ အမျိုးအစားများစွာကို သက်သာစေနိုင်တယ်လို့ များသောအားဖြင့် သိကြပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးတယ်ဆိုတာရော သင်သိပါလား။ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လေ့လာမှုများစွာနဲ့ သုတေသန ပြုချက်များစွာ ရှိပါတယ်။ ၎င်းလေ့လာမှုတွေရဲ့ ရလဒ်အရ ကျောရိုးနှင့် အဆစ်အမြစ်များကို လက်ဖြင့် အနေအထားပြုပြင်ပြောင်းလဲ ကုသသော အကြောပြင်ကုထုံးဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ပိုကောင်းစေတယ်ဆိုတာကိုပါ တွဲဖက်တွေ့ရှိရပါတယ်။ ထပ်မံလေ့လာဖို့တော့လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အနာဂတ်မှာတော့ ပိုကောင်းလာနိုင်ဖွယ်ပဲ ရှိပါတယ်။ ၎င်းပြုပြင်ကုသမှုဟာ သင့်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကို အတွင်းကျကျလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
အကြောပြင်ကုထုံးဆိုတာ ကျောရိုးနှင့် အဆစ်အမြစ်များကို လက်ဖြင့် အနေအထားပြုပြင် ပြောင်းလဲကုသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုသမှုဟာ ပထမဦးစွာတော့ ကြွက်သားများ၊ အဆစ်အမြစ်များ၊ အရိုးများနှင့် တွယ်ဆက်တစ်ရှူးများရဲ့ နာကျင်မှု ဝေဒနာကို သက်သာအောင် ပြုလုပ်ဖို့ရာ အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းပြုပြင်ကုသမှု ပေးသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ကျောရိုးချိန်ဆမှုများ ပြုလုပ်ကာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အနေအထားပုံစံကို မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ပိုမိုခေတ်မီလာတဲ့ နည်းပညာတွေအရ ၎င်းကုသမှုဟာ အမျိုးမျိုးသော အရိုးအဆစ်နဲ့ ကြွက်သားဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာဝေဒနာ အမျိုးအစားများစွာကို ကုသပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်ကတော့ ခန္ဓါကိုယ်အနေအထားဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ပြန်၍ မှန်ကန်သွားစေပြီး နာကျင်မှုဝေဒနာ သက်သာကာ ဆေးသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း ခံယူစရာ မလိုပဲ အလိုအလျာက် သဘာဝအတိုင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန် သွားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းအနေအထားပြုပြင် ကုသမှုကိ ုများသောအားဖြင့ိ တစ်ခြားသော ကုသမှုနည်းစနစ်များနှင့် ယှဉ်တွဲပြီး နာတာရှည် ရောဂါဝေဒနာ အခြေအနေတွေကို ကုသရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းပြုပြင် ကုသမှုမှာ ကျောရိုးကို လက်ဖြင့် အနေအထား ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ရုံ သာမက ကိုယ်နေဟန်ထားဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်း ပညာပေးခြင်း၊ လမ်းဘယ်လိုလျှောက်ရမယ် ဘယ်လိုထိုင်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ ခါးနောက်ကျောရိုးကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုမတ်တပ်ရပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေ၊ အာဟာရဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ အာထရာဆောင်းနှင့် လေဆာကုသမှုတွေတောင်မှ ပါဝင်လာပါတယ်။
ဒီလိုအကြောပြင်ကုထုံးဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေမှာလဲ။
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့ရာအတွက် သင့်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုအလုပ် လုပ်တယ်ဆိုတာကို အရင်ဆုံး နားလည်ဖို့ရာ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလိုအကြော ပြုပြင်ကုသမှုတွေဟာ သင့်ရဲ့ ဦးနှောက် ကျောရိုးနာ့ဗ်ကြောမကြီးနှင့် အာရုံကြောတွေရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ အလိုအလျောက်အာရုံကြော စနစ်ကို ပုံမှန်ကောင်းစေဖို့ရာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ သင့်ရဲ့ ဟော်မုန်းထွက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်အဖွဲ့အစည်းကို ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီး ဓါတုဗေဒဖြစ်စဉ်တွေကို ပုံမှန်လည်ပတ်စေကာ သင့်ကို ကျန်းမာအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျောရိုးတွေဟာ အနေအထား ပျက်ယွင်းနေမယ်ဆိုရင် အာရုံကြောလမ်းကြောင်းတွေဟာလည်း ပိတ်ဆို့သွားနိုင်ပြီး ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အာရုံကြောစနစ်ဟာ ဘေလုံး၊ ပြန်ရည်ကျိတ်များ နှင့် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ ကဲ့သို့သော ကလီစာ တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် တုံ့ပြန်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောရိုးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုဟာ နာကျင်မှုကို ခံစားရရုံသာမကပဲ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်မှ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံနှင့် လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကိုပါ သွားပြီးပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။
Ronald Pero (Ph.D., နယူးယောက် တက္ကသိုလ် ကင်ဆာကာကွယ်ရေးသုတေသန အကြီးအကဲ) ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အမျိုးမျိုးသော ကျောရိုးနာ့ဗ်ကြော ထိခိုက်မှုဟာ ကင်ဆာရောဂါ နှင့် ချိတ်ဆက် မှုရှိတယ်လို့ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခြင်းဟာ ပြန်ရည်ကြောကင်ဆာ နှင့် ပြန်ရည်ကြောဆိုင်ရာ သွေးကင်ဆာ အမျိုးအစားရောဂါတွေ ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုပြီးများစေနိုင်ပါတယ်။ သူရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိမှုမှ တစ်ဆင့် ကျောရိုး နှင့် အဆစ်အမြစ်တွေကို လက်ဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ကုသခြင်းအချိန်အကြာကြီး ခံယူသူ လူနာတွေဟာ မခံယူတဲ့လူနာ တွေထက်စာရင် ၂၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ကို ကိုယ်ခံအားစနစ် ပိုပြီးတက်နေတယ်ဆိုတာကို လေ့လာတွေ့ရှိ ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကင်ဆာ သို့မဟုတ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရောဂါရှိတဲ့ လူနာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တော့ ကုသမှုကို အချိန်အကြာကြီး ခံယူသူဟာ ၄၀၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို ကိုယ်ခံအားစနစ် ပိုတက်လာတယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
၎င်းပြုပြင်ကုသမှုဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်နှင့် ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကုသနိုင်ပါတယ် လို့တော့ အတိုချုပ်ပြောလို့တော့ မရပါဘူး။ ၎င်းဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် ကိုမြှင့်တင်စေတဲ့ ချိတ်ဆက်မှု တစ်ခုရှိတယ်လို့သာ အကောင်းဆုံး ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ပိုပြီးတိကျသေချာတဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းပြုပြင်ကုသမှုကို သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားတဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု သို့မဟုတ် ကင်ဆာရောဂါ ကုသမှုတွေအစား အစားထိုးပြောင်းလဲပေးဖို့ ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ၎င်းပြုပြင် ကုသမှုဟာ သင့်ရဲ့ ကုသမှုမှာ ပိုပြီး ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ ယူဆမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ အရင်ဆုံးတိုင်ပင် သင့်ပါတယ်။
Chiropractic Care Boosts the Immune System. http://valeohealthclinic.com/chiropractic-immune-system/ Chiropractic care for pain relief. http://www.health.harvard.edu/pain/chiropractic-care-for-pain-relief Chiropractic Care Can Help Your Immune System Work Better. http://pathoflifechiro.com/research/immune-system-function.html Boost Your Immune System?
https://www.sciencebasedmedicine.org/boost-your-immune-system/ Chiropractic boosts immunity. http://www.naturalnews.com/031206_chiropractic_immunity.html# Chiropractic Care Boosts the Immune System.